Dai 6, 2021 Maitri Jha UK, zvinhu zvinobatsira
Dai 6, 2021 Maitri Jha India, zvinhu zvinobatsira
Akanakisa eminwe oximeter UK
April 20, 2021 Maitri Jha UK, zvinhu zvinobatsira
Akanakisa chigunwe muromo oximeter India
April 20, 2021 Maitri Jha India, zvinhu zvinobatsira
April 15, 2021 Maitri Jha India, zvinhu zvinobatsira
Iwe unofunga kuti zvinotora nguva yakareba sei kuti uite runyorwa rweese maficha ako anobatwa nemaoko pazuva? Zvinopfuura zana, zvechokwadi! Kunyangwe izvi zvisiri zvinotyisa, huwandu hwehutachiona maoko ako anouya
Iwe unokatyamadzwa kunzwa vanhu vazhinji pasi rese vachirara mumatomu husiku hwese. Uye havadi kusiya yavo zviuru-zvemadhora ndangariro furo matiresi yazvo. Ivo vanoziva nezve zvakasarudzika mafaro ekurara ayo chete hammock anogona
April 14, 2021 Maitri Jha UK, zvinhu zvinobatsira
Tafura dzekofi dzinowanzoonekwa senzvimbo yekutarisisa yekutandarira. Uye saka zviri pakati pezvakakosha midziyo yemidziyo mune chero imba. Kunyangwe iyo tafura yekofi isingagumi mune zvakasikwa, inouya nenzira dzakasiyana siyana.